ENGLAND – Page 6 – Garsoore Sports
Daafaca kooxda Manchester City Ruben Dias ayaa ka caawiyay kooxdiisa in uu dib u rogo daafacooda islamarkaana gacan ka geysto inay u tartamaan hanashada horyaalka. Daafacan qaranka Burtaqiiska u safta ayaa usoo...
‘HORE U SOCDA!’ – Man United Oo Farriin U Dirtay Kooxaha Kula Tartamaya Horyaalka
Kooxda Macalin Ole Gunnar Solskjaer ayaa si buuxda u helay kalsoonidooda iyo qaabkooda, kaddib markii ay 9:0 ku xasuuqeen kooxda Southampton kulan ka dhacay garoonka Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonayay...
Cayaaryahanka reer Brazil ayaa lugta uga istaagay Willian Jose isagoo ku jira diilinta ganaaxa oo cidna aysan ka dambeyn wax yar kahor qeybtii nasashada ee kulankii Wolves iyo Arsenal, dhacdadaaasi ayaa keentay...
Kooxda Schalke 04 ayaa ku dhawaaqday saxiixa cayaaryahan Shkodran Mustafi oo Arsenal ka tirsanaa. Heshiiskan ay Shkodran Mustafi kula soo wareegeen Arsenal ayaa ah heshiis ilaa iyo dhammaadka xilli cayaareedkan 2020/21 si...
RASMI: Liverpool Oo La Wareegtay Ben Davies
Kooxda kubbada-cagta ee Liverpool ayaa si rasmi ah u shaacisay saxiixa cayaaryahanka daafaca uga cayaarayay kooxda Preston North End, Ben Davies. Cayaaryahankan 25-jirka ah ee daafaca dambe ka cayaara ayaa saxiixay heshiis...